Dabeyshii isbaddelka Geeska Afrika miyaa gaadhay Somaliland? | Berberanews.com
Home WARARKA Dabeyshii isbaddelka Geeska Afrika miyaa gaadhay Somaliland?
Waxaa habeenkii koowaad ku hoyday magaalada Hargeysa wasiirka arrimaha dibedda dalka Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed oo noqonaya mas’uulkii ugu heerka sareeyay ee ka tirsan urur goboleedka IGAD oo booqasha ku taga Somaliland.
Booqashada wasiirka waxa ay soconaysaa muddo saddex maalmood ah sida ay sheegtay dowladda Eritrea.
Balse su’aasha ugu badan ee taagan ayaa ah waxa ay tahay ujeedada safarkiisa iyo waliba waxa kusoo beegay xilligan.
Dr Mustafa Kaydsane oo ah aqoonyahay ku sugan magaalada Hargeysa oo ay BBC-du la hadashay ayaa qaba in sidan “Waa talaabo horey loo qaaday oo ku saabsan wada noolaanshaha iyo nabadeynta Geeska Afrika ayay u muuqataa”.
Inkasta oo booqashada wasiirka la sheegay in ay ku dhacday si kadis ah, haddane hab maamuuska loosoo dhoweeyay iyo heerka qaabilaada ayaa ka turjumayay sida Somaliland ay ugu riyaaqsantahay in fadhideeda loogu yimaado markan halkii ay iyadu gargaraaci lahayd albaabada dublamaasiyadda.
Boorar waaweyn oo muujinaya sawirka wasiirka iyo madaxweynaha Somaliland oo lagu qorey afka Ingiriiska ayaa la surey dariiqyada muhiimka ah ee magaalada Hargeysa sida uu BBC-da la wadaagay warfidiyeenka lagu magacaabo Khaalid Foodhaadhi oo ku foogan arrimaha Somaliland.
Dr Mustafa ayaa markale sharaxaya waxa ay Somaliland uga dhigantahay booqashadan “Somaliland waligeedba rajo ayay qabtay in ay maalinkan iman doonto, aad ayayna ugu sabirtay, arrinta arrin sahlan ma ahan, waa mid cusub, Somaliland wax weyn bay oga dhigantahay, in wasiir arrimo dibadeed oo IGAD ka tirsan in uu Somaliland yimaado, cid walbana haruubkeeda ayay tolanaysaa”.
Isbadelka Geeska Afrika
Markii ay kacday dabeysha isbadelka Geeska Afrika ee ka dhalatay Itoobiya, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo meel fagaaro ah kula hadlayay dadweyne ayaa u muuqday in uu calaamad su’aal galinayo arrinkan, balse waxa uu ku afeeftay in ay soo dhoweyn doonaan wixii nabad iyo wanaag lagu raadinayo.
Hadda waxa ay u egtahay in dabeyshii isbaddelka ay soo gaartay Somaliland, qodobadii ugu muhiimsanaa ee heshiiska iskaashigan Geeska Afrikana maanta lagu lafo gurayo madaxtooyada Hargeysa.
Markale Dr Mustafa ayaa sidan qaba “Go’doonkii Somaliland saarnaa in uu hadda jabay ayaad mooddaa, sidaas ayaan u akhrinayaa aniga”.
Mar aan sii fogeyn, madaxweynaha Somaliland waxa uu joogay magaalada Addis Ababa, halkaas oo uu kulan kula yeeshay Ra’isulwasaare Dr Abiy Axmed, mana ahan wax aad loo qariibsado suurtogalnimada in arrimo badan la’isla soo hadal qaaday.
Qodobka ugu weyn ee heshiiska Iskaashiga Geeska Afrika ayaa loo arkaa in uu yahay isdhexgal dhaqaale oo ay sameeyaan dalalka, si wadajir ahna loo maalgashado kaabayaasha dhaqaalaha sida dekadaha, waddooyinka iyo qadadka tareenada. Waa halkan meesha aanan malaha looga maarmin Somaliland marka laga hadlayo muhiimadda halka ay dhacdo dhul ahaan iyo dekada weyn ee Berbera oo haddaba ay hawlo ka socdaan.
Wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya
Booqashada wasiirka Eritrea waxa ay kusoo hagaagtay xili ay jirto hadal hayn ku saabsan dib u bilaabashada wadahadaladii hakadka ku jiray ee Somaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
Dhowaan madaxweyne Muuse Biixi ayaa soo hadal qaaday in ay bilaaban doonaan 19-ka bishan, balse sheegay in ay doonayaan dal kale oo aanan Turkiga ahayn.
Dr Mustafa waxa uu qabaa in booqashada wasiirka laga yaabo in ay xiriir la leedahay arrimaha wadahadalada “Xitaa safarka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee Muqdisho waxa ay u badantahay in ay wadahalada la xiriirto, hoostana la’iska wada ogyahay” ayuu yiri.
Xaqiiqda ah in Eritrea ay xubin muhiim ah ka tahay urur goboleedka IGAD ayuu Dr Mustafa Kaydsane oo hadalkiisa sii wata yiri “Wadahadalada soo socda Igad qeyb ayay ka tahay , dhanka guud markaan ka eegnana waxaan qiyaasanaynaa in wax uun la isu soo dhoweeyo , in Somaliland-na loo arko in aanan laga maarmaynin in ay qeyb ka noqoto geeska Afrika haddii ay dhaqaale noqoto iyo haddii ay nabad noqotaba”.
Xiriirka dublamaasiyadeed ee ka dhaxeeya Eritrea iyo dowladda Soomaaliya ayaa maraya heerkii ugu sareeyay, waana sababta ugu weyn ee meesha keentay mala awaalka in arrinta wadahalada ay booqashada ku saabsantahay.
Markii ay warbaahinta la hadleen wasiiradda arrimaha dibedda ee Eritrea iyo Somaliland, ma aysan sheegin faahfaahin badan oo aan ka ahayn afgobaadsi.
Wasiirka Eritrea ayaa yiri “Madaxweynahayga ayaa halkan iisoo direy bal si aan usoo eego wax aka socda Somaliland, waxaan ogahay in duruuf badan oo adag aan soo marnay oo isku mid aan ka nahay”.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga war dhawrayaa hadalka kama dambeysta ah ee soo bixi doona marka ay booqashada soo idlaato.
Previous articleWasiirka Gaadiidka Somaliland oo ka Warbixiyey Hawlaha Horumarinta Jidadka
Next articleWasiirka Maaliyadda Somaliland oo jaamacadda Hargeysa ka jeediyay khudbad ku saabsan maalgashiga